"Umphefumulo womunye ubumnyama", futhi ngisho nangaphezulu, intombazane! Kungakhathaliseki ukuthi kunzima kangakanani isigamu esiphezulu sobuntu ukuzama ukuqonda abesifazane, abakwazanga ukukwenza. Kodwa yini engingayenza uma ngifuna ukunikeza othandekayo wami lokho akufunayo, kodwa ngesikhathi esifanayo enze isimanga futhi kusimangaze? Isikhathi sonyaka omusha yisikhathi esihle kakhulu, futhi kubaluleke kakhulu ukuthi kuvela ukwenza inganekwane igcwaliseke! Funda kulesi sihloko mayelana nendlela yokwenza isipho intombazane ngoNyaka Omusha. Okuhlukile, okhethekile, okuthakazelisayo futhi, okubaluleke kakhulu - izinkumanga ezifanele zabathandekayo.
Isipho esithandekayo, noma isipho esithandekayo?
Okokuqala, udinga ukuqonda isigaba samanani sesethulo. Ungamangala nge-bauble eshibhile, nezandla zakho siqu ngendalo, ngisho ... ngenkondlo. Kodwa-ke, kubalulekile ukukhetha isipho ukuze intombazane ingangabazi noma imizwa yakho ngaye noma ngokuphana kwakho. Asikho isidingo sokukhetha izinketho ezibi kakhulu zokunikela, ngoba zingambeka esimweni esibucayi: uzofuna ukuthatha isimanga, kodwa kungase kube nzima kakhulu, futhi ngenxa yalokhu le nkosikazi izomlahla.
Isipho sentombazane onyakeni omusha kufanele ibe yinto yokuqala futhi iqondile. Asikho isidingo sokulindela noma yikuphi ukukhokhelwa noma ukubuyisela kuye isipho sakho, ngoba kubonakale ngokushesha ekuziphatheni komnikezeli, futhi izinkumbulo ezingenasisekelo zidinga kuphela amantombazane angenandaba. Uma unomthengi wemakethe (wena kimi - mina kuwe), bese unikezela okubiza kakhulu, futhi ulinde ngokulangazelela ukunyuka kokuphindisela.
Izipho ezinhle kakhulu zonyaka omusha: abangane, amadayimane
Abangane abangcono kakhulu bentombazane bangamadayimane. Kodwa ungasheshe ugijimele kulaba "abangane" kubathandekayo bakho, uma ubuhlobo bakho bungasondeli ngokwanele. Amantombazane amaningi anjengezindwangu zegolide, futhi abaqondi ukuthola isipho esinjalo esibalulekile kumuntu othandekayo. Uma lezi zikhathi zixazululwa, ungaqhubeka nokukhethwa.
Umkhiqizo ophathelene nezimo ezihlukahlukene kakhulu yisikhathi segolide. Kungase kuhloswe ukuba igqoke esifubeni noma ingalo. Uma intombazane ingenayo uchungechunge lapho izobe ibeke khona isikhathi, ngakho-ke kungcono ukushiya lo mbono. I-pendant ingaba nemimoya ehlukene kanye nezimpawu, ngakho-ke, ngaphambi kokulungiselela "ukumangala kwegolide" kuyakudingeka ukuba unobtrusively uthole ukuthi yiziphi izinhlobo eziheha owesifazane wakho wenhliziyo.
Isipho "segolide" esintombazane ngoNyaka KaNcibijane kufanele senze ngokungabi nalutho. Akufanele kube into efana neyendandatho yomshado, kungakhathaliseki ukuthi uzoshada noma cha, noma inhliziyo ehlatshwe umcibisholo ebonisa kokubili uthando kanye nokwenzeka okujabulisayo. Zonke lezi zobungqabako ekukhetheni isimanga kufanele zicatshangelwe ukuze zingangeni esimweni esingenangqondo.
Ikhono lezintombikazi eziphambili
Isipho soNyaka Omusha kumuntu wesifazane, uma esebenza, kungaba yikhungo lobuchwepheshe elizomsiza kuye emsebenzini webhizinisi. Isibonelo, ikhompyutha encane ephathekayo noma ithebhulethi. Uma into yakho yokudumisa ingumfana osemusha, unganika idivaysi yokuzijabulisa: i-mp3 enhle noma i-iPhone. Ukukhethwa kwetheknoloji yentombazane kuxhomeke emsebenzini wakhe oyinhloko. Uma ehlala ezinsukwini nobusuku be-inthanethi, futhi enesihlungu, lapho engakwazi ukufinyelela inethiwekhi ngenxa yokungabi khona kwe-PC ephathekayo, mnike lona injabulo encane futhi uyojabula!
Izimonyo: ngokuvamile futhi ezisebenzayo
Isipho esivela emhlabeni wonke ngentombazane esithombeni seNew New - izimonyo noma amakha. Iyiphi intombazane ayithandi iphunga elimnandi kusukela ekuqoqweni kwakamuva kweChanel noma izimonyo ezinjenge-silk-like like Dior? Ukuze unikeze izimonyo intombazane, udinga ukwazi kahle ukunambitheka kwakhe, futhi lokhu kuyinkimbinkimbi ukukhetha isipho. Futhi nokho, uma wazi okuthandayo okuyinhlokokazi, khona-ke ukukhetha okuthile kusuka ezimonini zekhwalithi akulula. Umthetho oyinhloko lapha akukona ukunikeza imikhiqizo yabakhiqizi abancinci. Ingaqukatha izithako ezinonya ezingabangela izifo. Uma ungafuni ukulimaza intombazane - ungafaki ama-elite brand cosmetic.
Izingubo: "Konke nonke, bathandekayo, nigqoke kuhle!"
Izembatho zingaba isipho soNyaka Omusha, ikakhulukazi, isethi sezingubo zangaphansi ezinhle, uma ubuhlobo bakho busondele ngokwanele. Uma kungenjalo, isipho esinjalo sizobonwa njengokuphambene futhi sithunyelwe kudoti kungaba kanye nokuthandana kwakho. Ukunikeza abathandekayo bakho izingubo zokugqoka kufana nokuhamba emgqeni wommese: kukhona ingozi yokwenza iphutha ngesayizi. Uma unika kancane kakhulu - lesi sipho sizohlolwa njengesisindo esiningi kakhulu, futhi uma sikhulu kakhulu - njengokuphulwa kokuvumelana kwayo engcwele. Kodwa uma uqagela ngobukhulu, u- Eva Wonyaka Omusha ongasoze awukhohlwa , kungenzeka ukuthi uzonikezwa. Uyozama konke phambi kwakho.
Ingxenye ebaluleke kakhulu ukuhlela isipho bese uyethula. Kubaluleke kakhulu ukwethula isimanga sakho ngesithunzi nokuphakama, ukukhombisa ukuthi ujabulela yini ukumnika yona. Ungakwazi ukufihla isipho ngaphansi kwesihlahla sikaKhisimusi, ungakwazi ukuhlela wonke umbukiso noma ushintshe ku-Santa Claus. Konke kuxhomeke emcabangweni wakho. Uma ukumangazwa kuvezwa ngokumnandi, kuzosusa ingxenye yomqondo ongayikhiqiza. Isipho singadlalwa kangcono njengendlela yokumangalelwa kwamaphuzu ngezwi leTheti Yonyaka Omusha.
Uma ukhetha isethulo, khumbula ukuthi izipho ezinhle kakhulu zonyaka omusha yizo ezenziwa ngenhliziyo ehlanzekile nangothando.